China Kwakarongedzwa Kusurukirwa Mapfekero mukuchengeteka zvipfeko Mvura Isolate Cover Gown Hanzu fekitori uye vanotengesa | ASN
Mucheka Type SMS
Nguo Bvunzo EN13795-1-2019, EC-REP
Zvimiro Yakareba sleeve, Yakatenderedza mutsipa (Velcro), Rib cuff, yakapetwa chiuno tayi, Ultrasonic musono
PP Pasuru 1 pc / bhegi
Saizi yekatoni 60 * 44 * 36cm
Huremu hwese 7.5KG
- Ungaita sei kubvunza?
Pls titiudze izvo izvo zvinhu, saizi, huwandu hwechigadzirwa iwe chaunoda, pamwe neyako nzira yaunoda yekuendesa. Tinogamuchira vatengi vekutanga. Ingotitumira mifananidzo yezvinyorwa iwe zvaunoda kuti isu tipe kana kutiudza isu zvezvaunoda. Tinogona kukupa iwe yakafanana kana kunyange yepamusoro mhando nhumbi.
- Unogona kundiitira dhizaini here?
Ndicho chinangwa chedu! Tinoda kugadzira zvinoenderana nemifungo yako neruzivo. Shanduko diki dzinogona kuitirwa mahara. Nekudaro, hombe dhizaini shanduko ichaunza imwe yekuwedzera mari
- Ndeipi yakajairwa nguva yekutumira?
Nguva yekutumira inowanzo kuve mazuva makumi mashanu nemashanu.
- Ndeapi mazwi ekubhadhara?
Isu tinobvuma T / T.
- Ko kana paine dambudziko nezvigadzirwa mushure mekugamuchira?
Isu tinotora mifananidzo yako usati watumira yekusimbisa. Kana iwe ukaona chero kushomeka kwekugadzira, ndapota titumire chiziviso (chigadzirwa mifananidzo neemail). Isu tichagadzirisa zvisina kukodzera kana kuita imwe muripo.
Pashure: Wemabhonzo Splint
Zvadaro: PVC magiravhusi